Wada Hadal Kusaabsan Biyo Xidheenka Wayn Ee Dib-U-Curashada Oo Maanta Itoobiya, Suudaan Iyo Masar Uga Furmay Khartuum. - Cakaara News
Wada Hadal Kusaabsan Biyo Xidheenka Wayn Ee Dib-U-Curashada Oo Maanta Itoobiya, Suudaan Iyo Masar Uga Furmay Khartuum.
Khartuum(CN) Talaado.Maarso.03.2015, Shir kusaabsan mashruuca wayn ee biyo xidheenka dib u curashada Itoobiya oo ay kawada hadlayaan dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa maanta kafurmay magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galaya wasiirada arimaha dibada iyo wasiirada biyaha iyo tamarta ee saddexda dal Itoobiya, Suudaan iyo Masar.
Waxaa hada kahor jiray shirar lagu qabtay dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay Khartuum iyo Addis Ababa kuwaas oo lagu heshiiyay aas aaska gudi isku dhaf ah una qaabilsan farsamada iyo Injineeriyada oo kakooban afar afar xubnood oo saddexda dal ah, si ay u sameeyaan laba daraas oo laxidhiidha saamaynta iyo farsamada mashruuca ee dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ee dalalka.
Daraasaadkan ayaa xooga saaraya habka qul-qulka iyo kaydka ee biyo xidheenka (Hydrological Simulation Model) iyo saamaynta uu kuleeyahay farsamo ahaan dalalka biyo shubka hoose wabiga Abaay. Waxayna Itoobiya iyo Maser rajo wanaagsan iyo heshiis ku gaadheen labadan daraasaad oo ay latalin kayihiin lana rabo in ay darsaan 4 shirkadood oo caalami ah kuwaas oo ay dikumiintigoodii soo xaraynayaan gudiga iskudhafka ah ee farsamada.
Sida uu qaar kamida warbaahinta dalka ugu waramay wasiirka wasaarada biyaha iyo tamarta ee DFI mudane Alemayehu Taganu shirkan oo soconaya Arbacada iyo Khamiista ayaa waxaa lafilayaa in ay gudiga isku dhafka ah ee dalalku ay mid kadoortaan 4-ta shirkadood ee caalamiga ah kuwaas oo la isla qiimanayo.
Afartan shirkadood ee caalamiga ah ayaa waxaa kamid ah shirkada BRL Engineering oo laga leeyahay Faransiiska iyo midkale oo laga leeyahay Australiya kuwaas oo ay Itoobiya soo dhigayso maadaama ay khibrad u leeyihiin mashaariico badan oo dhanka biyaha ahna ka qabteen 12-kii sano ee u danbaysa dalka.
Shirkan Khartuum ayaa gudigan ay dalalku dhisteen kawada hadlayaan islamarkaana isla qiimanayaan shirkada loo dooranayo daraasaadka iyo wakhtiga ay bilaabayso. Waxaana ugu danbaynta heshiiska kasoo baxa qalinka lagu duugi doonaa xarunta dalaka Itoobiya ee Caasimada Addis Ababa.
Sida ay sheegayaan khuburadu ku xeel dheer wabiga Abbay arintan ayaa ah mid farsamo balse aan ahayn mid siyaasadeed. Mar aan wax kawaydiinay siyaasi u dhasahay DDSI ayuu sheegay in ay hada kahor heshiisyo iyo rajo fiican gaadheen Itobiya iyo Maser iyadoo ay Suudaan garab taagantahay markasta mashruucan oo ay u argato mashruuc Afrika.
Dhanka kale Itoobiya waxay markasta taagan tahay sida danta u ah ee aan cidna ama dariska wax yeelo u gaysanaynin iyadoo kaduusha danta guud ee mashruuca.
Kala soco CakaaraNews faah faahinta iyo go'aamada kasoo baxa shirkan maanta bilaabmay ee Khartuum.